‘निष्क्रिय रहेका सामूदायिक वनहरूलाई सक्रिय बनाउने प्रभावकारी माध्यम नै ईको–टुरिजम्’ हो | .:: Bansanchar.com
‘निष्क्रिय रहेका सामूदायिक वनहरूलाई सक्रिय बनाउने प्रभावकारी माध्यम नै ईको–टुरिजम्’ हो
डा.इन्द्रप्रसाद सापकोटा, प्रमुख जिल्ला वन अधिकारी, काठमाडौं
ई.सं. १९७० मा मकवानपुर जिल्लामा जन्मिनुभएका डा.इन्द्रप्रसाद सापकोटा हाल जिल्ला वन कार्यलय काठमाडौंमा प्रमुख जिल्लावन अधिकारीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । वि.संं. २०५२ सालमा सहायक जिल्ला वन अधिकृतको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु भएको थियो । उदयपुरबाट सुरु भएको उहाँको यात्रा जिल्ला वन कार्यलझापा, वन तालिम केन्द्र विराटनगर, जिल्ला वन कार्यलय चितवनको प्रमुख हुँदै डेढ वर्ष अगाडी काठमाडौंको जिल्ला वन कार्यलय सम्हाल्न आउनुभएको हो । स्वीडेनको ‘स्वीडिस युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चर साइन्स’ विश्वविद्यालयबाट ‘फरेष्ट म्यानेजमेन्ट’ विषयमा विद्यावारीधि गर्नु भएका उहाँ नेपालको एक वरिष्ठ वन विशेषज्ञ समेत हुनुहुन्छ । उहाँले नेपाल सरकारको वन मन्त्रालय अन्तर्गत वन सम्बन्धी विभिन्न नीति निमार्ण कार्यमा सहभागि भई एउटा सफल नीति, रणनीति निमार्णमा विषेश भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ ।वन क्षेत्रको संरक्षण, विकासमा विशेष योगदान पु¥याउनु भएका उहाँ वातावरणीय संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान पु¥याए बापत दिइने ‘अब्राहम कन्र्जभेसन’, स्टार अवार्ड लगायतका तीनवटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय पुरष्कारबाट पुरष्कृत हुनु भएको छ । दुई दशक भन्दा लामो समय सरकारी पदमा रही देश र जनताको सेवामा तल्लिन हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ काठमाडौं जिल्लाको वन क्षेत्रको समग्र अवस्था र समस्यामा केन्द्रीत भएर वनसञ्चारका उप–सम्पादक सुजन सुबेदीले गरेको समसामयिक कुराकानी :
काठमाडौं जिल्ला भित्र रहेको वन क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
काठमाडौं जिल्लाभित्र करिब २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भन्दा बढी क्षेत्र वनले ओगटेको छ । जसमा शिवपुरी–नार्गाजुन राष्ट्रिय निकुञ्जको ‘बफर जोन’ भित्र ४३ वटा सामूदायीक वन गाभिएका छन्भने बाँकी रहेको वन क्षेत्र १७६ वटा सामूदायिक वनको रूपमा रहेका छन् । यस जिल्लाको वन क्षेत्र एउटा यस्तो वन क्षेत्र हो जुन व्यापारीक हिसाबमा कम मूल्यवान काठपैदावर भएको वन क्षेत्र हो। जस्तै चिलाउने, कटुस, लालीगुँरास, सल्ला,खस्रु आदि प्रजातिका रुखहरू पाईन्छ । जसको बजार मूल्य तराईक्षेत्रमा पाईने साल, सिसौको तुलनामा अति न्यून रहेको छ ।हाल संरक्षण गरिरहेको वन क्षेत्रबाट उल्लेख्यरूपमा काठ उत्पादन गर्न सकिरहेकोे अवस्था छैन । सामूदायिक वनबाट न गुणस्तरीय काठ नै उत्पादन भएको अवस्था छ, न दाउरा नै उत्पादन भएको छ । जिल्ला भित्र रहेका १७६ सामूदायिक वनहरूको क्रियाकलाप प्रायःसबै निष्क्रिय रहेको अवस्था छ । सामूदायिक वनहरुले आर्थिक अभावका कारण साधरणसभा, लेखा परीक्षण,वृक्षरोपण जस्ता क्रियाकलाप गर्न सकिरहेका छैनन् ।
निष्क्रिय रहेका सामूदायिक वनहरूको गतिविधि सक्रिय बनाउन के गरिरहनु भएको छ ?
सामूदायिक वन क्षेत्र भित्र भएका विभिन्न प्रजाति,विरुवा,जंगलमा भएका डाँडाकाँडालाई के गर्दा चाहिँ बढी उत्पादनमूखि हुनसक्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान भईरहेको छ । जिल्ला भित्र रहेकासामूदायिक वनहरूको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानियसँग प्रत्यक्ष छलफल, संवाद, रायसुझाव लिने कार्य गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म २५ वटा भन्दा बढी सामूदायिक वनक्षेत्र भित्रका स्थानिय बासिन्दाहरूसँग छलफल कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ । छलफल पश्चात्निष्क्रिय रहेका स्थानियलाई सक्रिय, उत्साहित, बनाउनको लागि पर्या–पर्यटन (Eco-Tourism) को माध्यम नै प्रभावकारी उपाय हुने निष्कर्ष निकालेका छौँ । र ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई पर्या–पर्यटन (Eco-Tourism) लाई अनिवार्य लागू गर्ने लक्ष्यको साथ यसको अवधारण, महत्व र यसको सम्भावनाको बारेमा बुझाउने कार्य गरिरहेका छौँ ।अहिले निष्क्रिय रहेको सबै सामूदायिक वनहरू विस्तारै सक्रिय हुँदै गएका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा पर्यापर्यटनको जमर्को गरिरहेका छन् ।तराईका सामूदायिक वनहरूको जतिकै आम्दानी गर्न सफल हुन्छौ भन्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढेका छन् ।
काठमाडौं जिल्लाभित्र रहेका वन क्षेत्रमा पर्या–पर्यटन (Eco-Tourism)को सम्भावना कत्तिको रहेको छ?
काडमाडौंमा रहेका सम्पूर्ण वनक्षेत्रहरूमा पर्या–पर्यटन(Eco-Tourism)को सम्भावना प्रचुरमात्रमा रहेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि यी क्षेत्रहरूमापिकनिक स्पट, भ्यूटावर,बञ्जीजम्प, बायोडाईभर्सिटी हटस्पट, जंगल होलिडे ट्रयाक, जंगल वाल्क, टे«किङ रुटहरूको निमार्ण गरी प्रशस्त मात्रमा फाईदा लिन सकिन्छ । काठमाडौंको प्रदुषित, कोलाहलमय वातावरणबाट मुक्त हुनको लागि सामूदायिक वन क्षेत्रभित्र शुक्रबार देखि शनिबार सम्मको दुईदिने ‘होलिडे प्याकेज’ सञ्चालन गर्न सम्म सकिने सम्भावना रहेको छ । यी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पर्यापर्यटनको माध्यमबाट प्रचुर फाइदा लिन सक्ने सम्भावनाहरू धेरै छन् । पर्यापर्यटनको विस्तारको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पक्षहरू समावेश गरेर पर्यापर्यटन निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार पारेर वन विभाग मार्फत वनमन्त्रालयमा पुगेको छ ।
हाल संरक्षण गरिरहेको वन क्षेत्रबाट उल्लेख्यरूपमा काठ उत्पादन गर्न सकिरहेकोे अवस्था छैन ।
निष्क्रिय रहेका सामूदायिक वनहरूलाई सक्रिय बनाउने प्रभावकारी उपाय नै पर्या–पर्यटन (Eco-Tourism) हो । र यस क्षेत्रमा Eco-Tourismको सम्भावना प्रचुर मात्रमा रहेको छ ।
काठमाडौंका सामूदायिक वन क्षेत्रभित्र दुईदिने ‘होलिडे प्याकेज’ सञ्चालन गर्नसकिने सम्भावना रहेको छ ।
सरकार, सामूदायिक वनका उपभोक्ता र उत्पादन गर्ने उत्पादक बीचमा त्रि–पक्षीय मोडालिटी बनाएर व्यावसायिक जडिबुटी खेतीतर्फ उत्साहित गर्नु पर्दछ ।
काठमाडौं जिल्ला वन कार्यलयले शहरमा करिब ६ हजार भन्दा बढी विरुवा वृक्षारोपण गरिसकेको छ । संरक्षणको नयाँ तरिका अपनाउँदै स्थानिय बासिन्दाले आफैँ संरक्षण गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका ठाउँमा मात्र वृक्षरोपण गर्ने गरेका छौँ ।
नापी कार्यलयले अनाधिकृतरूपमा जथाभावी जंगलको बीचबाट सडकको नक्साङ्कन गरिदिनाले वन विनाश बढीरहेको छ ।
लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणको लागि ‘ट्रेड कन्ट्रोल’ गर्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व रहेको छ
बाँदर, बँदेल जस्ता जनावरबाट हुने कृषि उत्पादनको क्षतीको क्षतिपूर्ति दिन नसकिरहेको अवस्था छ । जनताले वर्ष दिनभरी खाने खानेकुरा वन्यजन्तु नोक्सान गर्दा राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन ।
अनि यी वन क्षेत्रमा व्यावसायिक जडिबुटी उत्पादनको अवस्था के–कस्तो छ ?
काठमाण्डौको वन क्षेत्रमा व्यावसायिक जडिबुटी उत्पादनको सम्भावना व्यापक छ । यसको लागि प्रयासहरू नि भईरहेका छन् ्र व्यावसायिक जडिबुटी खेतीको लागि प्रस्तावहरू पनि नआएका होइनन् । तर व्यावसायिक खेतीको गर्नको लागि केही कानुनी बाधाअडचन रहेको छन् । स्थानियलाई हस्तान्तरण गरिसकेको वनक्षेत्रमा सरोकारवाला उपभोक्तालाई कहाँनिर ‘फिटइन’ गर्ने भन्नेबारेमा केही अस्पष्ट रहेको छ । सरकार, सामूदायिक वनका उपभोक्ता र उत्पादन गर्ने उत्पादक बीचमा त्रि–पक्षीय मोडालिटी बनाएर व्यावसायिक जडिबुटी खेती तर्फ उत्साहित गर्नु पर्दछ ।
हरित शहर निमार्णको लागि जिल्ला वन कार्यलयको तर्फबाट के–कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भईरहेको छ ?
जनस्वास्थ्य सँग जोडिएको विषय हरित शहर निमार्णको लागि हामीले व्यापकरूपमा कार्य गरिरहेका छौँ । तत्कालीन मूख्यसचिव लीलामणी पोखरेलले चलाउनु भएको बागमती सरसफाई अभियानसँग समन्वयन गरी जहाँजहाँ ढल निमार्णको कार्य समाप्त भएको छ त्यहाँ हामीले वृक्षरोपण कार्य गर्दै आएका छौँ । हाल सम्म बागमती नदी किनाराका गोकर्ण, जोरपाटी, बुद्धनगर टेकु लगायतका ठाउँहरूमा ६ फीट भन्दा अग्ला करिब ४ हजार बोटविरुवा वृक्षरोपण गरीसकेका छौँ ।त्यस्तै पेप्सीकोला, साँखु, कुलेश्वर लगायतका स्थानका पार्कमा पनि २ हजार भन्दा बढी विरुवा रोपिसकेका छौँ । हामीले रोपेका विरुवाहरूले शहरलाई हरियाली प्रदान गर्नसक्ने भैसकेका छन्, जसले शहरको सोभा र सौन्दर्य बढाएको छ । शहरी स्वास्थ्यलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी निकै सक्रिय रूपमा अगाडी बढीरहेका छैं ।
चाँडै शहरलाई हरियाली बनाउन विदेश तिर सिधै रुख रोपिन्छ तर हाम्रोमा चाहिँ स–साना विरुवा रोपिन्छ, जुन हुर्केर हरियाली प्रदान गर्न लामो समय लाग्छ । यहाँ पनि सिधै रुख रोप्न सकिन्न र ?
रुख रोप्न विरुवा रोप्न भन्दा धेरै खर्चिलो छ । त्यसको लागि हामीसँय पर्याप्त मात्रमा स्रोतसाधन, प्रविधिको अभाव छ । जुन हाम्रो आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्दैन, र त्यो अहिलेको प्राथमिकताको विषय पनि होईन । हामी वृक्षरोपण गर्नको लागि वातावरण नै यति अनुकुल छ कि जहाँ हामी विरुवा रोपेर पनि छिट्टै रुख बनाउन सक्छौं । वृक्षारोपण गरेका ९० प्रतिशत भन्दा बढी विरुवाहरू राम्रोसँग सरेका, हुर्केका छन् ।
वृक्षरोपण गरिएका विरुवाहरू छाडा चौपायहरूले खाईदिने, नोक्सान गरिदिेने गरेका छन्, तिनको संरक्षण कसरी भईरहेको छ ?
हामीले वृक्षरोपण गरेका विरुवाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरपालिकाको हो । छाडा चौपायको नियन्त्रण, व्यवस्थापनको लागि महानगरपालिका सक्रिय भएर लाग्नु पर्दछ । यसका साथै हामीले वृक्षरोपण गरेका बोटविरुवाको संरक्षणको लागि एउटा नयाँ तरिका अपनाएका छौँ । जुन–जुन ठाउँका स्थानिय बासिन्दाले आफैँ संरक्षण गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् त्यस ठाउँमा मात्र वृक्षरोपण गर्ने गरेका छौँ । यसको सम्पूर्ण दायित्व, जिम्मेवारी स्थानियलाई सुम्पेका छौँ । वोटविरुवा संरक्षणको यो तरिका निकै प्रभावकारी र सफल भएको छ ।
पूर्वाधार विकासको नाममा अवैज्ञानिक ढंगबाट विस्तार गरिएका ग्रामिण कृषि सडक विस्तारले पनि व्यापक रूपमा वन क्षेत्रको विनाश भईरहेको छ । यसको न्यूनिकरणको लागि के–कस्ता कार्यहरू गरिरहनु भएको छ ?
कृषिसडक विस्तारको नाममा जथाभावि वन विनाश कार्य भईरहेको छ । जसले गर्दा भू–क्षय, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप बढीरहेका छन् भने अर्कोतर्फ वातावरणीय सौन्दर्य बिगारीरहेको छ । सामूदायीक वन क्षेत्रको राय,सूझाव र अनुमती नलिई अनाधिकृतरूपमा खनिएका नाङ्लेभारे सडक, रामकोट–सितापाईला र साँखुको सडक तीन वटा सडक विस्तार कार्य रोकेका छौँ । जसमध्ये एउटालाई रामकोट–सितापाईला सडक विस्तार आयोजनालाई मुद्दासमेत लगाएका छौँ । नापी कार्यलयले अनाधिकृत रूपमा जंगलको बीचबाट जथाभावी नक्साङ्कन गरिदिन्छ र त्यसलाई बदर गर्नको लागि प्रक्रिया अघि बढेका छौँ । जंगलबाट जथाभावि, मनोमानी ढंगले बातावरण सम्बन्धी आइई, ईआईईए जस्ता प्रक्रिया पूरा नगरीकन गर्ने सबै प्रोजेक्टहरूलाई रोक्नको लागि जिल्ला विकास समिति मार्फत निकासाहुने आर्थिक अनुदान समेत रोक्न लगाएका छौँ । यसरी नै विभिन्न कार्य गर्दै जथाभावि निमार्ण हुने कृषि सडको विस्तारमा रोक लगाउँदै वन विनाश न्यूनिकरण गर्ने कार्यमा सक्रिय भएर अगाडी बढेका छौँ ।
लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षण र चोरीशिकारी दिनानुदिन बढी रहेकोछ । यसको नियन्त्रण कसरी गरिरहनु भएको छ ?
लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणको लागि ‘ट्रेड कन्ट्रोल’ गर्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व रहेको छ । जसको लागि हामीले अपराध अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सँग सहकार्य गरी विभिन्न अप्रेशनहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । अवैध चोरीशिकारी गर्ने लाई कुनैपनि हालतमा कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । तस्करीहरूलाई मुद्दा चलाउनेकाम गरेका छौँ । म जिल्ला वन कार्यलय काठमाडौंमा आईसकेपछि मात्र १ सय भन्दा बढीलाई मुद्दादर्ता गराएका छौँ, १ सयको हाराहारीमा मुद्दाफैसला भईसकेको छ , १ सय५०देखि दुई सय सम्म व्यक्तिलाई कसुरदार प्रमाणित गरेका छाँै । अर्को तर्फ जंगली जनावरबाट घाईते भएका तथा चोरी शिकारीको शिकार भएका वन्यजन्तुहरूको उद्दार कार्यलाई पनि त्यत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेका छौँ । तीन सय २६ भन्दा बढी प्राणीहरूलाई जीवित उद्दार गरेका छौँ । विश्व बैंक अन्तर्गत सञ्चालित ‘रेस्क्यू एण्ड रिहाबिलिटेसन प्रोजेक्ट’सँग सहकार्य गरी जिवजन्तुको उद्दार गर्ने गरेका छौँ । यसरी उद्दार गरिएका जीवजन्तुलाई तिनीहरूको प्रकृति अनुसार सदर चिडियाखाना र राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाउँदै आएका छौँ ।
एकातर्फ लोपोन्मुख भन्दै संरक्षण गरिहेका छौँ , अनि यिनै हामीले संरक्षण गरेका जीवजनावरहरूले आम मानिसलाई आतंकित बनाउनुको साथै ज्यानै समेत लिने गरेका छन् । यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ ?
वन्यजन्तुबाट मानवलाई हुने आक्रमण÷आतंक नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ गरिरहेका छौं । यसको नियान्त्रको लागि प्रमुखरूपमा दुई वटा कार्य गर्नु पर्दछ । पहिलो कुनै पनि वन्यजन्तुबाट घटना हुनै नदिने कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ । जसको लागि हामी केही चुकेका छौँ । सक्रिय रूपमा लागि पर्दापर्दै पनि असफल भईरहेका छौँ । दोस्रो एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा ‘मुभ’ गर्ने जीवजनावरको व्यवस्थापन गर्ने कार्य एकदमै चुनौतिपूर्ण र जटिल रहेको छ । ‘क्रप डिप्रिसेसन’को अनुमान÷आँकलन गर्न नसक्नु पनि कमजोरीकोरूपमा रहेको छ । बाँदर, बँदेल जस्ता जनावरबाट हुने कृषि उत्पादनको क्षतीको क्षतिपूर्ति दिन नसकिरहेको अवस्था छ । संशोधित राहत निर्देशिका–२०७२ मा पनि यसको बारेमा केही व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन । जंगली जनावरबाट कृषि उत्पादनमा हुने क्षतिलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न निर्देशिकामा संशोधन गरी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । जनताले वर्ष दिनभरी खाने खानेकुरा वन्यजन्तु नोक्सान गर्दा राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैनभन्ने मान्यता लिएर अगाडी जादैछौँ । वन्य जन्तुको आक्रमण बाट घाइते भएकाहरूको उपचार खर्च उपलब्ध गराएका छौँ । तीव्ररूपमा जतिसक्दा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ ।
अन्तमा,भर्खरै नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ , उहाँबाट चाँहि विद्यमान समस्याहरूको समाधान हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
म एकदमै आशावादी छु । मन्त्रीज्यूलाई हामीले स्वागत गर्ने क्रममा जुन निर्देशन पाएका छौँ, त्यसको अक्षरशः कार्यन्वयन, पालना गर्दै अघि बढ्र्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछु । मन्त्रीज्यूले दिनुभएका हरेक निर्देशनलाई कार्यन्वयन गर्न, ग्राउन्डमा लैजान, स्थानिय तहमा लैजान हामी दत्तचित्त भएर लागेका छौँ÷लाग्नेछौँ । वन क्षेत्रमा हाल रहेका हरेका समस्याहरूको समाधानमा प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षाका साथ मन्त्रीज्यूको सफल र फलदायी कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।